Mampitaitaina: miakatra tsikelikely ny vidin-tsolika | NewsMada
Mampitaitaina: miakatra tsikelikely ny vidin-tsolika
Mitaintain-dava ny mpanjifa rehefa madiva hifarana toy izao ny volana. Tsotra ny antony, miova isaky ny fiandohan’ny volana ny vidin-tsolika, satria mihatra ny tena vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Roa volana mialoha ny famandrihana ataon’ny mpanafatra sady mpaninjara solika eto amintsika, izany hoe hihatra amin’ity volana septambra ity ny vidiny tamin’ny volana jona teo amin’ny tsena iraisam- pirenena. Tsikaritra fa nisondrotra ny vidiny satria manodidina ny 65 dolara ny iray barila, ny volana jona teo, tafakatra 73 dolara ny volana jolay ary manodidina ny 68 dolara ankehitriny.
Voalazan’ny mpandinika fa anisan’ny antony mampiakatra ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny olana eo amin’i Etazonia sy Iran. Voasazy tsy hahazo hivarotra amina firenena tandrefana maromaro i Iran, ka namoaka ny tahiriny ny Amerikanina.
Tranga iray mampitaintaina ny mpanjifa eto amintsika koa ny olana anatiny. Tsy mahazo ny fanampiana ara-potoana ny vola fanentsenana ny banga avy amin’ny fanjakana ny mpitatitra taxi-be ka mandrahona hampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar.